Jacob Zuma ma laga xayuubin doonaa madaxweynenimada Koonfur Afrika? - BBC News Somali
Jacob Zuma ma laga xayuubin doonaa madaxweynenimada Koonfur Afrika?
Jacob Zuma, madaxweynaha ay fadeexadaha hareeyeen ee Koonfur Afrika ayaa laga yaabaa in uusan dhamaysanin waqtiga uga dhiman muddo xileedkiisa maadaamaa xisbiga talada haya ee ANC hoggaankiisa loo doortay Cyril Ramaphosa.
Sanooyinkii ugu dambeeyay Ramaphosa waxa uu ahaa madaxweyne ku xigeenka Zuma, balse xiriirkooda ma ahayn mid sahlan.
Ramaphosa waxa uu ololaha doorashada ku galay barnaamij la dagaalanka musuqa, dad badana waxa ay aamineen in uu ka dhabayn doono in eedeymaha musuqmaasuqa ee loo heysto Zuma maxkamad lagu saaro.
Hoos waxaan kusoo koobaynaa dhawr siyaabood oo ay suurtogal tahay in ay wax u dhacaan.
1.Zuma oo xilka laga eryay
Image caption Zuma oo baarlamaanka hadal ka jeedinaya
Xisbiga ANC waxa uu ka fogaan doonaa in ay abuurmaan labo saldhig awoodeed oo hardamaya, oo ay labo hoggaamiye oo lid isku ah kala maamulaan, kuwaas oo kala ah hoggaamiyaha xisbiga iyo madaxweynaha dalka.
Sidaas darteed waxa uu xisbiga go'aansan karaa in uu eryo Mr Zuma maadaamaa loo arko in uu halis ku yahay xisbiga in uu aqlabiyada markale helo marka la gaaro doorashooyinka sanadka 2019-ka.
Tani waxa ay wadada u xaaraysaa in Ramaphosa uu awoodda la wareego, si markaas codbixiyeyaasha uu kalsooni cusub ugu beero xili ANC ay halis ugu jirto in ay lumiso aqlabiyadeeda boqolkiiba 62% ah.
Balse waa talaabo halisteeda leh oo kala qeybin karta xisbiga.
Xubno olog la ah Zuma oo xilal awood badan ka haya xisbiga sida madaxweyne ku xigeenka iyo xoghayaha guud ayaa laga yaabaa in ay ka horyimaadeen talaabo kasta oo xilka looga qaadayo Zuma.
Ma noqon doonto markii koowaad oo ANC ay xilka ka dirto madaxweyne uusan xiligiisa dhamaanin, waxa ay ku dhacday Thabo Mbeki sanadkii 2008-dii kadib markii Zuma ku guuleystay madaxweynenimada ANC sanadkii 2007-dii.
Go'aan kasta oo xilka looga eryayo Zuma waxaa gaaraya golaha dhexe ee xisbiga oo loo yaqaano NEC, kaas oo ah kan leh go'aanka ugu sareeya ee xisbiga.
Sida uu nidaamka u shaqeeyo, mid ka mid ah golaha dhexe ayaa soo jeedinaya in madaxweynaha xilka laga qaado, kadibna golaha oo tiradoodu dhantahay 100 ayaa u codeynaya ama go'aan wadar-ogol ah ka gaaraya mustaqbalka madaxweynaha.
Xisbiga ayaa soo xulanaya xubnaha golaha dhexe inta uusan dhamaanin shirweynaha Johannesburg ka socda, waxaana la arki doonaa in dadkaasi ay noqdaan kuwa taageerayaal u ah Zuma iyo in kale.
Suurtogal ma ahan in lasii ogaado xiliga ANC ay xilka ka qaadayso Zuma, balse dadka siyaasada u dhuun duleela ayaa sheegaya in xisbiga uu xilka ka eryi doono Zuma ka hor Hadal-Jeedinta Qaran ee Madaxweynaha oo dhacaysa bisha Feberaayo, xiligaas oo uu furmo baarlamaanka.
Samadoda Fikeni oo ah falanqeeye siyaasadeed ayaase qaba in xil ka eryidda Zuma ay dhici karto mar xiligaas kasii dambeysa maadaamaa dacwada loo heysto madaxweynaha ay maxkamadaha hor tagayaan sanadka 2018-ka, waxaana ka mid ah 18 dacwadood oo musuqmaasuq ah.
Fikeni ayaa waxa uu intaas ku daray in ANC ay si fiican u garanayso Zuma in uusan ahayn nin dagaal la'aan iska taga, lagana yaabo in uu dab ku huriyo ANC haddii isaga la rido.
2.Zuma oo isaga is casilo
Image caption Dad daawanaya khudbadii is casilaadda ee Thabo Mbeki sanadkii 2008-dii
Waxaa kale oo iyadana suurtogal ah in hoggaanka ANC ay Zuma ku qanciyaan in uu xilka isaga dego sida uu qabo Mr. Fikeni.
"Hoggaamiyeyaasha ANC waa ay fahamsanyihiin dhibaatada uu sababi karo Zuma, xitaa waxa uu halis ku yahay doorashada 2019-ka" ayuu yiri Fikeni.
Sidaasi darteed waxaa laga yaabaa in ay ka codsadaan in uu xilka isaga dego, haddii uu taas diido , markaas ayaa lagu qasbanaan doonaa in xisbiga uu eryo.
3.in Zuma xilka sii hayo illaa dhammaadka waqtigiisa.
Image caption Qof ka mid ah taageerayaasha ANC
Waxaa jira dad ku doodaya in ay arrin qalad ah tahay in Ramaphosa uu isku dayo in uu xilka ka qaado Zuma, maadaamaa taas ay xisbiga sii kala jabinayso, islamarkaasna jiho wareerinaysa arrinta dhabta ah ee ah in loo diyaargaroobo doorashooyinka 2019-ka.
Waxaa Ramaphosa lagula taliyay in uu faraha ka qaado Zuma, islamarkaasna kaligiis wajoho dacwada loo heysto.
Garsoorka Koonfur Afrika waa mid aad u madax banaan, wuxuuna marar hore xabsiga dhigay dad ay darajadoodu sarayso.
Dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegaya in Zuma uu aad ugu mashquuli doono dacwadaha loo heysto , waqtina uusan u heli doonin in uu qalqal galiyo Ramaphosa.
Haddii ay taasi dhacdana waxa ay Ramaphosa siin doontaa fursad uu isugu diyaariyo doorashada soo socota. Iyo in uu xisbiga mideeyo.